अब म खाइदिउंला दिपाको लागि गा,'ली! माफी त अपरा,धि प्रमाणित भएपछि मात्रै दिइने कुरा हो ! तारा बराल नया भिडियो सहित ! - Complete Nepali News Portal
अब म खाइदिउंला दिपाको लागि गा,’ली! माफी त अपरा,धि प्रमाणित भएपछि मात्रै दिइने कुरा हो ! तारा बराल नया भिडियो सहित !
नेपाली सिने क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको बिषय ‘महानायक’ को बारेमा आफ्नो धारणा पोख्नु भएको छ तारा बराल ले । आफ्नो फेसबुक सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै सानो भिडियो फुटेज सार्बजनिक गर्नु भएको छ । हुन् त यस बिषयमा तारा बराल को अभिव्यक्ति दिपा श्री निरौला को सपोर्ट मा देखा परे पनि यही नै यथार्त हो भन्दै आफ्नो जिज्ञासा र धारणा व्यक्त गर्नु भएको भिडियो पुरा हेर्नुहोला ।
लाजैमर्दो! (दिपा श्री,राजेश काण्ड) नेपाली चलचित्र जगतको अन्तराष्ट्रिय बदनाम! जहाँ विकास र चलचित्र जगत माटामा मिलेकोछ त्यहि देशमा महानेता र महानायक नाममा लट्ठुहरुको लडाइं, हलिउड र बलिउडले जस्तो के गरेकोछ त कलिउडले!?
व्यक्ति मात्रै बनेर हुदैन,चलचित्रवोर्डको विकास खै त!? राजेशले पाएको रोलमा दर्शक रुवाउंथे दिपाले हसाउंछिन्,वोर्डलाई त योगदान नपुगेकै हो नि! बरु सहकर्मी दिपाका कुरालाई राजेशले त सल्लाहको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ!
माफी त अपराधि प्रमाणित भएपछि मात्रै दिइने कुरा हो, “सम्बन्धित व्यक्तिलाई माफ दिनुहोला!” भनेर पूरा भिडियो नहेरी,अर्थ नबुझी मनपरी भुक्ने मुर्खहरुलाई राजेशले जवाफ दिनैपर्दैनथ्यो , दिपकले चाहिँ के गरेकाथिए र दिपासंग जोडेर सञ्जालमा बेइजत गरियो!? कि मुर्खले चाहिं मनपरी अपशब्द बोलेपनि छुट छ कानुनमा!?राजेशले पनि करिश्मा लगायत महिलाहरुसंग खेलेनन् र फ्लिम!? म खाउंला दिपाका लागि अब गाली,केही छैन!